Ciidamada Kenya oo mar kale burburiyay Xarun Shirkadda Isgaarsiinta Hormuud ku laheyd deegaan u dhow Dhoobley. • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Jubaland / Ciidamada Kenya oo mar kale burburiyay Xarun Shirkadda Isgaarsiinta Hormuud ku laheyd deegaan u dhow Dhoobley.
Ciidamada Kenya oo mar kale burburiyay Xarun Shirkadda Isgaarsiinta Hormuud ku laheyd deegaan u dhow Dhoobley.
August 13, 2018 - By: Mjama
Ciidamo ka tirsan kuwa dowladda Kenya ayaa mar kale gubay xarun ay laheyd Shirkadda Isgaarsiinta Hormuud.
Ciidamada Kenya oo ka soo tallaabay xadka Soomaaliya iyo Kenya ayaa xalay qaraxyo loo adeegsaday Miinooyin ku burburiyey xaruntii Shirkadda Hormuud ee Tuulada Calibuley oo 30KM dhanka waqooyi uga beegan degmada Dhoobley ee Gobolka Jubada Hoose.
Isgaarsiinta deegaanka ayaa weli hawada ka maqan, iyadoo Shacabka halkaas ku nool siin jirtay adeegyo kala duwan oo isugu jiray Isgaarsiin iyo adeegga EVC Plus oo muhiim u ah nolosha dadka halkaas ku nool.
Dhowaan ayey aheyd markii Saamileyda Shirkadda Hormuud ay kulan deg deg ah ka yeesheen dhibaatada ay ciidamada Kenya ku hayaan ganacsigooda iyagoo Dowladda Soomaaliya ugu baaqay inay arrintaas wax ka qabato.